बस दुर्घ’टना हुँदा ७ जनाको ज्या’न गयो, ७ घा’इते ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारबस दुर्घ’टना हुँदा ७ जनाको ज्या’न गयो, ७ घा’इते !
बस दुर्घ’टना हुँदा ७ जनाको ज्या’न गयो, ७ घा’इते !
पाल्पा । पाल्पामा श-व बोकेको बस दुर्घ’टना हुँदा ७ जनाको ज्या’न ग’एको छ। बुटवलदेखि रिडी जादैगरेको लु १ ख ७२७९ नम्बरको बस रिब्दीकोट गाउँपालिकास्थित लघुवामा दुर्घ’टना भएको हो। आइतबार बिहान करिब १०ः३० बजेको समयमा दुर्घ’टना भएको थियो । दुर्घ’टनामा ७ जना ग’म्भीर घा’इते भएका छन् ।
घा’इतेलाई तान सेन स्थित युनाइटेड मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचारा लागि पठाइएको छ । श-व बोकेको बसमा करिब ३५ जना यात्रु रहेकोमा अन्य यात्रुहरु सामान्य घा’इते भएको जिल्ला प्रहरि कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । मृ,त’कको सनखत हुन बाकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घ’टनाको थप विवरण आउन बाँकी छ ।
यो पनि, माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक जारी : नेकपा (माओवादी केन्द्र) स्थायी कमिटी बैठक कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी छ। पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी छान्नका लागि बैठक बसकेको हो। बन्दसत्र आज दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित छ । बन्द सत्र सुरु हुनअघि स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो । माओवादीको महाधिवेशन सुरु भएको ८ दिन भइसक्दा पनि नेतृत्व चयनमा सकस भएको छ । अध्यक्ष बाहेक पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी चयनमा समस्या देखिएको छ।केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी चयनका लागि प्रचण्डले आज पार्टी शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टै छलफल समेत गरेका छन्।